Home News Warbaahinta Kenya maxaa ay ka qortay heshiiskii Dekadaha ee Soomaaliya iyo Itoobiya?
Warbaahinta Kenya maxaa ay ka qortay heshiiskii Dekadaha ee Soomaaliya iyo Itoobiya?
Wargeeysyaadda ka soo baxa dalka Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiikii shalay ay magaalada Kenya ku kala saxiixdeen Kenya iyo Soomaaliya. Wargeeyska wayn ee maalinlaha ee lagu magacaabo Nation ayaa cadadkiisa maanta waxa uu qoray maqaal ugu magacdaray “ Soomaaliya iyo Itoobiya oo heshiis dekado wadagalay” ayaa aad u dheeraaday isbdalka deg-dega ah ee ku yimid Madaxweyne Farmaajo iyo sababta ka danbeeysay in uu heshiis kula kalo dekadaha Soomaliya Itoobiya.
Wargeeyska ayaa sheegay in MW Farmaajo ogolaaday heshiiskii dekada Barbera ee horaantii sanadkaan uu sida ba’an uga soo horjeestay. Waxa uuna wargeeysku sheegay in Madaxweyne Farmaajo uu dhabarka xejiyay go’aankii baarlaamanka Soomaaliya.
Wargayska ayaa hadlakiisa ku soo gaba-gabeeyay wali lama oga sida dowlad goboleedyadda Somaliland iyo Puntland ay u arki doonaan heshiiskaas madaama ay labaduba heshiis horay ula galeen dowlada Imaaraadka. Waxaan shaki ku jirin in MW Farmaajo go’aan isaga u gooni ah qaatay oo uusan kala tashan dowladiisa iyo Baarlaamaanka Soomaaliya toona?
Su’aashu waxa ay tahay Baarlamanka Soomaaliya maxuu ka yeeli doonaa Hishiiskaan dhaqsaha lagu galay?
Ku qor qiyaastaada sida loo kala badin doono
Previous articleWasiirkii Arimaha Dibadda Soomaaliya oo kulankii RW Axmed Abiy laga qarsaday? Maxaa u haray?
Next articleAL Jazeera oo ka hadashay Heshiiskii Dekadaha Soomaaliya iyo Itoobiya?
Maxkamada Darajada Kowaad Ee Ciidamada Qalabka Sida Oo Xukun Ku Riday...